အလှူငှတှေကေ ၃ပုံ ၁ပုံ ပဲစခနျးရောကျတယျ ဆိုတဲ့ အခွအေမွဈမရှိ စှတျစှဲခကျြတှကေို တုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ထားထကျထကျ – Maythadin
May Thadin | July 8, 2021 | Celebrity | No Comments
စခနျးမှာ ထပျတိုးလာတဲ့သူတှေ အတှကျရယျ စခနျးရဲ့ဖှံဖွိုးတိုးတကျလာဖို့ အတှကျရယျ နစေရာ ၊ ဝတျစရာ နဲ့ စားစရာတှေ လိုအပျလာတာသိလို့ အလှူငှအေတှကျ ကွိုးစားတဲ့အခါ ကိုယျ့လှတျလပျမှုကို စတေးရပါတယျ…။လုံခွုံရေးစညျးကြိုးပေါကျသှားတဲ့အခါ ၊ ဒလံက ကိုယျ့အရေးပျေါပွေးလမျးပါ သတငျးပေးလိုကျတဲ့အခါ ကိုယျရှောငျတိမျးဖို့ ပွငျထားတဲ့နရောရဲ့ ( စခနျးတခုလုံးရဲ့လုံခွုံရေးအရ ) ဒုတိယစီမံခကျြကို လိုကျလြှောကျရတယျ… အဲ့ဒီ အခြိနျအထိလဲ အလှူရသမြှ စခနျးအတှကျကောကျခံပေးနတေုနျးပဲ။
အလှူငှနေဲ့ ပတျသကျလို့ ကြှနျမ crypto currency ကို အဖှဲ့တခုရဲ့ mail နဲ့ ဖှငျ့ထားလို့ သူတို့နဲ့ ဆကျသှယျပွီး စိတျကွိုကျစဈဆေးနိုငျပါတယျ…. (messenger မှာမေးလို့ရပါတယျ) စင်ျကာပူက ရသမြှ ပို့တဲ့ အမထံ ငှစောရငျးထားရှိပါတယျ။ ကြှနျမ ငှေ မကိုငျပါ..… ကိုရီးယားက အမထံ ငှစောရငျးထားရှိသလို ရသမြှ အမ မရှမေိုး အသိဆုံးမို့ အမြားကို အသိပေးတဲ့ငှနေဲ့ စာရငျးတိုကျစဈနိုငျပါတယျ….။
ဂပြနျ ၊ ယူကေ ၊ အမရေိက ၊ ဩစတွေးလြ တာဝနျခံပေးတဲ့ အကို အမ တှနေဲ့ ကြှနျမ page မှာ ကွငွောထားတာနဲ့စာရငျး အခြိနျမရှေး တိုကျဆိုငျ စဈဆေး နိုငျပါတယျ…..အလှူရငှေ ကပျြ သိနျး ၁၁၀၀ ဝနျးကငျြကို တကယျလိုအပျနတေဲ့ လူသားခငျြးစာနာမှု အထောကျအကူပွု ပစ်စညျးတှမှော အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။ တာဝနျယူကောကျခံပေးတဲ့ အကို အမ တှေ နဲ့ လကျခံရရှိသူတှေ တိုကျရိုကျမေးလို့ ရပါတယျ….။
အလှူလကျခံသူတှေ ညှနျးတဲ့ ဆိုငျမှာပဲ ပစ်စညျးတှေ မှာယူခဲ့ပွီး ကြှနျမ လကျခံရရှိတဲ့ အလှူစာရငျးကို အားလုံး မွငျနရေပါတယျ….မွနျမာကပျြငှကေို July လ မှာ စတငျလကျခံပွီး ယခုအခြိနျအထိ သိနျး ၁၀၀ ဝနျးကငျြရှိပါတယျ….. မွနျမာကပျြငှအေလှူဟာ အလှူရှငျတှအေတှကျ လုံခွုံရေးပွသနာ ရှိနတေဲ့ အတှကျ သတိကွီးကွီးထားပွီး အလှူငှရေဖို့ထကျ အလှူရှငျအန်တရာယျ မဖွဈအောငျ တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားဆောငျရှကျပါတယျ…..။
ကြှနျမ မဖွဈမနေ ဆောငျရှကျရနျရှိတဲ့ ကိစ်စတခြို့ကွောငျ့ ပထမဆုံးရှိနခေဲ့တဲ့ စခနျးနဲ့ အဝေးရောကျနရေငျရောကျနမေယျ….. ဒါပမေယျ့ ကိုယျတတျနိုငျတာကို ဆကျလကျဆောငျရှကျပေးနပေါသေးတယျ…. အဓိက လိုအပျနတေဲ့ လိုအပျခကျြတှေ အတှကျ ပိုကောငျးတဲ့ အဖွတှေေ ရှာပေးနပေါသေးတယျ….. အခုအထိလဲ လုပျဆောငျနသေလို အဖွလေဲ ရှာပေးနပေါတယျ…..။
ဘာလို့ ဒီလိုရေးနရေလဲဆိုတော့ ဒီရကျပိုငျးမှာ ကြှနျမ စိတျကို နာကငျြစတေဲ့ ကိစ်စတခုရှိနလေို့ပါပဲ…အဲ့ဒါကတော့… ကြှနျမ ပထမ စခနျးကနေ အခွားနရောတခုကို ရှောငျတိမျးခဲ့ပွီး ရကျ ၂၀ လောကျမှာ စခနျးက သတငျးတခု ကြှနျမ အသိညီမတဈယောကျဆီကို ရောကျလာပါတယျ…..ပွီးခဲ့တဲ့ (၇) ရကျလောကျမှာ ဂပြနျက မိတျဆှေ တဈယောကျရဲ့ အသိက messenger မှာသတငျးတခု ပေးလာပါတယျ…..။
ဒီရကျပိုငျးမှာပဲ နိုငျငံတခုက အလှူအတှကျ အကူအညီတောငျးခံထားတဲ့ သူဆီက သတငျးတခု ထပျရောကျလာပါတယျ…..သတငျးကတော့ တခုထဲပါ…ကြှနျမဆီကိုလှူရငျ အလှူငှကေ ၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ စခနျးဆီ ရောကျတယျ ဆိုတဲ့ သတငျးပါပဲ….. နရောတှသော ကှဲတာ သတငျးက လုံးဝကို တခုထဲ ပါပဲ…..ကြှနျမ အလှူစကောကျတဲ့ အခြိနျကစလို့ June လကုနျ အထိ သိနျး ၁,၁၀၀ ရပွီး အကုနျပွနျလှူဒါနျးပွီးပါပွီ….. စခနျး တာဝနျခံသညျ အရောငျးသမား ဆီမှာ လိုတဲ့ပစ်စညျး ယူရုံပါပဲ….. ငှတေော့ သူတို့ လကျထဲ မထညျ့ပေးပါဘူး။ဆိုငျရှငျက စခနျးတာဝနျရှိသူ ညှနျတဲ့ ဆိုငျရှငျပါပဲ…။
ပစ်စညျးယူတဲ့အခါမှာ Covid ကိစ်စကွောငျ့နဲ့ အခွားလုံခွုံရေးကိစ်စတှကွေောငျ့ (ငှအေကခြေပြွေီးသား) ခကျြခငျြးမရောကျနိုငျ ပိတျမိနတောမြိုးတှလေဲ ရှိပါတယျ။ကြှနျမတို့ ပစ်စညျးမှာယူ ပို့ဆောငျရေးလမျးကွောငျးပျေါမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့အရာတိုငျးကို public ထံ အသေးစိတျရှငျးပွ ခပြွလို့မရတာတှလေဲ ရှိပါတယျ…ကြှနျမ အာမခံနိုငျတာက အခုလှူပေးနကွေတဲ့သူတှကေကိုယျ့မိသားစု စားမယျ့ထမငျး ၂ လုပျထဲက ၁ လုပျကိုလြှော့စားပွီး လှူနကွေတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကြှနျမ အသကျသာအသခေံမယျ ဘယျတော့မှ ကြှနျမကိုယျကြိုးအတှကျ အလှူငှေ ထဲက တပွားတခပျြ တောငျ အသုံးမပွုပါဘူး။
ကြှနျမတို့စခနျးဆီကိုလှူတဲ့ပစ်စညျးတှထေဲက ကြှနျမ အတှကျ သုံးမိတာ အင်ျကြီ ၂ ထညျ နဲ့ ခွငျမကိုကျဆေး ၁ ဘူးပါပဲ…..ကြှနျမ အတှကျ ကိုယျရေး ကိုယျတာ သုံးဖို့ ပေးတဲ့ မုနျ့ဖိုးကိုတောငျ အမြားအတှကျ သုံးဖို့ပဲ အလှူထဲ ထညျ့ပါတယျ…ကိုယျတိုငျလဲ အလှဲသုံးစား မလုပျသလို အလအေလှငျ့ မဖွဈရစအေောငျ တတျနိုငျသမြှ ကွိုးစားဆောငျရှကျပါတယျ…..။
ကိုယျ့စခနျးမှာ လိုအပျတာတှေ အမွနျဆုံးနဲ့အရငျဖွညျ့နရေငျး ၊ ကိုယျ့စခနျးတခုသာမက အခွားစခနျးတှအေတှကျပါ ကူနိုငျအောငျကွိုးစားရငျး ၊ ကိုယျ ကွိုးစား သညျးခံသမြှ ဒီလို အထငျလှဲ ပွောဆိုခံရမှုနဲ့ ထိုကျတနျတယျလို့ မထငျပါဘူး…..ဒါကွောငျ့မို့လို့ ဒီလ ကုနျရငျ စခနျးအတှကျ ကြှနျမ အလှူခံတဲ့ကိစ်စကို ရပျနားပါတော့မယျ…..။
ကြှနျမ လုပျနိုငျတဲ့ ၊ ကြှနျမ တတျနိုငျတဲ့ အခွားအရာတှေ ဆကျလုပျသှားပါမယျ…ကြှနျမလကျရှိ ဆောငျရှကျလကျြရှိနတေဲ့ အလှူကိစ်စကို NUG နဲ့ EAO ကို အထောကျအကူပွုမယျ့ ရညျရှယျခကျြကိုပဲ အာရုံစိုကျ ဆောငျရှကျသှားပါတော့မယျ…ကြှနျမ ယုံကွညျခကျြနဲ့ ကြှနျမ ဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ ကိစ်စတှေ ဖွဈလို့ ခြီးကြူးသံ ၊ လကျခုပျသံတှေ မရရငျလဲ နတေတျ ၊ ကနြေပျပွီးသား ဖွဈသလို စိတျကိုလဲ ပွငျဆငျပွီးသား ဖွဈပါတယျ… ဒါပမေယျ့ သိက်ခာပိုငျးအရ ထိခိုကျမှု ၊ တှနျးတိုကျမှုကိုတော့ ဘယျနညျးနဲ့မှ ခှငျ့လှတျလကျခံမှာ မဟုတျဘူးဆိုတာ သိစခေငျြပါတယျတခြို့တှကေ စတေနာနဲ့ မတနျဘူး မဟုတျလား။
အလှူငွေတွေက ၃ပုံ ၁ပုံ ပဲစခန်းရောက်တယ် ဆိုတဲ့ အခြေအမြစ်မရှိ စွတ်စွဲချက်တွေကို တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ထားထက်ထက်
စခန်းမှာ ထပ်တိုးလာတဲ့သူတွေ အတွက်ရယ် စခန်းရဲ့ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ အတွက်ရယ် နေစရာ ၊ ဝတ်စရာ နဲ့ စားစရာတွေ လိုအပ်လာတာသိလို့ အလှူငွေအတွက် ကြိုးစားတဲ့အခါ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုကို စတေးရပါတယ်…။လုံခြုံရေးစည်းကျိုးပေါက်သွားတဲ့အခါ ၊ ဒလံက ကိုယ့်အရေးပေါ်ပြေးလမ်းပါ သတင်းပေးလိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ရှောင်တိမ်းဖို့ ပြင်ထားတဲ့နေရာရဲ့ ( စခန်းတခုလုံးရဲ့လုံခြုံရေးအရ ) ဒုတိယစီမံချက်ကို လိုက်လျှောက်ရတယ်… အဲ့ဒီ အချိန်အထိလဲ အလှူရသမျှ စခန်းအတွက်ကောက်ခံပေးနေတုန်းပဲ။
အလှူငွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်မ crypto currency ကို အဖွဲ့တခုရဲ့ mail နဲ့ ဖွင့်ထားလို့ သူတို့နဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်…. (messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်) စင်္ကာပူက ရသမျှ ပို့တဲ့ အမထံ ငွေစာရင်းထားရှိပါတယ်။ ကျွန်မ ငွေ မကိုင်ပါ..… ကိုရီးယားက အမထံ ငွေစာရင်းထားရှိသလို ရသမျှ အမ မရွှေမိုး အသိဆုံးမို့ အများကို အသိပေးတဲ့ငွေနဲ့ စာရင်းတိုက်စစ်နိုင်ပါတယ်….။
ဂျပန် ၊ ယူကေ ၊ အမေရိက ၊ ဩစတြေးလျ တာဝန်ခံပေးတဲ့ အကို အမ တွေနဲ့ ကျွန်မ page မှာ ကြေငြာထားတာနဲ့စာရင်း အချိန်မရွေး တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး နိုင်ပါတယ်…..အလှူရငွေ ကျပ် သိန်း ၁၁၀၀ ဝန်းကျင်ကို တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အထောက်အကူပြု ပစ္စည်းတွေမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ တာဝန်ယူကောက်ခံပေးတဲ့ အကို အမ တွေ နဲ့ လက်ခံရရှိသူတွေ တိုက်ရိုက်မေးလို့ ရပါတယ်….။
အလှူလက်ခံသူတွေ ညွှန်းတဲ့ ဆိုင်မှာပဲ ပစ္စည်းတွေ မှာယူခဲ့ပြီး ကျွန်မ လက်ခံရရှိတဲ့ အလှူစာရင်းကို အားလုံး မြင်နေရပါတယ်….မြန်မာကျပ်ငွေကို July လ မှာ စတင်လက်ခံပြီး ယခုအချိန်အထိ သိန်း ၁၀၀ ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်….. မြန်မာကျပ်ငွေအလှူဟာ အလှူရှင်တွေအတွက် လုံခြုံရေးပြသနာ ရှိနေတဲ့ အတွက် သတိကြီးကြီးထားပြီး အလှူငွေရဖို့ထက် အလှူရှင်အန္တရာယ် မဖြစ်အောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါတယ်…..။
ကျွန်မ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိတဲ့ ကိစ္စတချို့ကြောင့် ပထမဆုံးရှိနေခဲ့တဲ့ စခန်းနဲ့ အဝေးရောက်နေရင်ရောက်နေမယ်….. ဒါပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်တာကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသေးတယ်…. အဓိက လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ အဖြေတွေ ရှာပေးနေပါသေးတယ်….. အခုအထိလဲ လုပ်ဆောင်နေသလို အဖြေလဲ ရှာပေးနေပါတယ်…..။
ဘာလို့ ဒီလိုရေးနေရလဲဆိုတော့ ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကျွန်မ စိတ်ကို နာကျင်စေတဲ့ ကိစ္စတခုရှိနေလို့ပါပဲ…အဲ့ဒါကတော့… ကျွန်မ ပထမ စခန်းကနေ အခြားနေရာတခုကို ရှောင်တိမ်းခဲ့ပြီး ရက် ၂၀ လောက်မှာ စခန်းက သတင်းတခု ကျွန်မ အသိညီမတစ်ယောက်ဆီကို ရောက်လာပါတယ်…..ပြီးခဲ့တဲ့ (၇) ရက်လောက်မှာ ဂျပန်က မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ရဲ့ အသိက messenger မှာသတင်းတခု ပေးလာပါတယ်…..။
ဒီရက်ပိုင်းမှာပဲ နိုင်ငံတခုက အလှူအတွက် အကူအညီတောင်းခံထားတဲ့ သူဆီက သတင်းတခု ထပ်ရောက်လာပါတယ်…..သတင်းကတော့ တခုထဲပါ…ကျွန်မဆီကိုလှူရင် အလှူငွေက ၃ ပုံ ၁ ပုံပဲ စခန်းဆီ ရောက်တယ် ဆိုတဲ့ သတင်းပါပဲ….. နေရာတွေသာ ကွဲတာ သတင်းက လုံးဝကို တခုထဲ ပါပဲ…..ကျွန်မ အလှူစကောက်တဲ့ အချိန်ကစလို့ June လကုန် အထိ သိန်း ၁,၁၀၀ ရပြီး အကုန်ပြန်လှူဒါန်းပြီးပါပြီ….. စခန်း တာဝန်ခံသည် အရောင်းသမား ဆီမှာ လိုတဲ့ပစ္စည်း ယူရုံပါပဲ….. ငွေတော့ သူတို့ လက်ထဲ မထည့်ပေးပါဘူး။ဆိုင်ရှင်က စခန်းတာဝန်ရှိသူ ညွှန်တဲ့ ဆိုင်ရှင်ပါပဲ…။
ပစ္စည်းယူတဲ့အခါမှာ Covid ကိစ္စကြောင့်နဲ့ အခြားလုံခြုံရေးကိစ္စတွေကြောင့် (ငွေအကျေချေပြီးသား) ချက်ချင်းမရောက်နိုင် ပိတ်မိနေတာမျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ကျွန်မတို့ ပစ္စည်းမှာယူ ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတိုင်းကို public ထံ အသေးစိတ်ရှင်းပြ ချပြလို့မရတာတွေလဲ ရှိပါတယ်…ကျွန်မ အာမခံနိုင်တာက အခုလှူပေးနေကြတဲ့သူတွေကကိုယ့်မိသားစု စားမယ့်ထမင်း ၂ လုပ်ထဲက ၁ လုပ်ကိုလျှော့စားပြီး လှူနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်မ အသက်သာအသေခံမယ် ဘယ်တော့မှ ကျွန်မကိုယ်ကျိုးအတွက် အလှူငွေ ထဲက တပြားတချပ် တောင် အသုံးမပြုပါဘူး။
ကျွန်မတို့စခန်းဆီကိုလှူတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲက ကျွန်မ အတွက် သုံးမိတာ အင်္ကျီ ၂ ထည် နဲ့ ခြင်မကိုက်ဆေး ၁ ဘူးပါပဲ…..ကျွန်မ အတွက် ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ သုံးဖို့ ပေးတဲ့ မုန့်ဖိုးကိုတောင် အများအတွက် သုံးဖို့ပဲ အလှူထဲ ထည့်ပါတယ်…ကိုယ်တိုင်လဲ အလွဲသုံးစား မလုပ်သလို အလေအလွင့် မဖြစ်ရစေအောင် တတ်နိုင်သမျှ ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပါတယ်…..။
ကိုယ့်စခန်းမှာ လိုအပ်တာတွေ အမြန်ဆုံးနဲ့အရင်ဖြည့်နေရင်း ၊ ကိုယ့်စခန်းတခုသာမက အခြားစခန်းတွေအတွက်ပါ ကူနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်း ၊ ကိုယ် ကြိုးစား သည်းခံသမျှ ဒီလို အထင်လွဲ ပြောဆိုခံရမှုနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ မထင်ပါဘူး…..ဒါကြောင့်မို့လို့ ဒီလ ကုန်ရင် စခန်းအတွက် ကျွန်မ အလှူခံတဲ့ကိစ္စကို ရပ်နားပါတော့မယ်…..။
ကျွန်မ လုပ်နိုင်တဲ့ ၊ ကျွန်မ တတ်နိုင်တဲ့ အခြားအရာတွေ ဆက်လုပ်သွားပါမယ်…ကျွန်မလက်ရှိ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့ အလှူကိစ္စကို NUG နဲ့ EAO ကို အထောက်အကူပြုမယ့် ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲ အာရုံစိုက် ဆောင်ရွက်သွားပါတော့မယ်…ကျွန်မ ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကျွန်မ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လို့ ချီးကျူးသံ ၊ လက်ခုပ်သံတွေ မရရင်လဲ နေတတ် ၊ ကျေနပ်ပြီးသား ဖြစ်သလို စိတ်ကိုလဲ ပြင်ဆင်ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် သိက္ခာပိုင်းအရ ထိခိုက်မှု ၊ တွန်းတိုက်မှုကိုတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ ခွင့်လွှတ်လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်တချို့တွေက စေတနာနဲ့ မတန်ဘူး မဟုတ်လား။
တောငျကွီးမွို့က ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ ရမှေနျအမှတျတရအနနေဲ့ ရမှေနျပုံရိပျတှနေဲ့ အခနျးလေးကိုပွုလုပျထား
“ကိုကြျော့ အတှကျ စိတျမပူကွပါနဲ့ ကိုကြျောရဲ့ရှကေ့နေ ကြှနျတျော မားမားမတျမတျ ရငျဆိုငျပေးသှားမှာပါ” ဆိုတဲ့ ကိုရဲမငျး AAC
အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လှတျရာသို့တိမျးရှောငျနရေတဲ့ သမီးလေးကိုအရမျးလှမျးနကွေောငျးရငျဖှငျ့လာတဲ့ ပိုငျဖွိုးသုရဲ့မိခငျ
အဆိုတျော ရမှေနျအတှကျ တဦးတညျးသောညီမလေးရဲ့ ပေးစာ.. (ဖတျပွီး..စိတျမကောငျးဖွဈရတာထကျပိုပါတယျ)